Ny fanamboaran-dalana no isan'ny vaindohan-draharaha, izay havokavoky ny fampandrosoana sy ny toe-karena.
Apetraka ny fenitra fanam-boaran-dalana, izay fenitra efa fanao fa noho ny kolikoly dia nodiana tsy hita.
1- Orin'asa tena mpanao lalana no anatontosa ny asa, ary atao mangaraharaha ny tolotra na ny appel d'offre. Ny Orin'asa Malagasy na manana siège eto Madagasikara ihany no mahazo ny Tolotra, ny vahiny sous-traitance ihany.
2- Manana garantie décennale, na antoka 10 taona ny lalana amboarina, raha kely indrindra;
3- Takiana ny taratasy avy amin'ny banky na trano fiantohana izany orin'asa sy lalana amboariny izany;
4- Manana ny fitaovana sy ny traik'efa amin'izany ilay orin'asa hiantoka ny asa, ireo vao miana-draharaha dia any amin'ny sous-traitance aloha izy, na any amin'ny lalana madinika;
5- Takiana amin'ireo trano fiantohana na assurance n'ny fiara nanimba ireny lalana na fotodrafitrasa, toy ny tetezana, poteau, balise ireny raha nisy lozam-pifamoivoizana nanimba ny lalana;
6- Afaka mitory ny fanjakana, na ny nanamboatra ny lalana ny mpampiasa lalana raha vokatry ny haratsian-dalana namboarina no nampitera-doza azy;
7- Ampiasaina anaovana ny lalana ny vola hetra azo avy amin'ny solika (FER), alefa mivantana amin'ny Faritra nisy ilay station nakana ilay solika araka ny fitsinjarana:
* 50% Fokontany
* 25% Kaominina
* 10% Faritra (3)
* 15% Foibe
8- Averina ny cantonnier, na ireo olona mpikojakoja an-davan'andro ny lalana, manapaka bozaka amin'ny sisiny, manadio ny lakan-drano;
9- Averina ary omena fitaovana ny Travaux, ka izy avy hatrany no hanamboatra sy hanao ny asa vaventy maika;
10- Omena fitaovana ny Génie militaire, izay hiaraka amin'ny Service National, hamaky lalana, hanao pavé sy goudron ary béton ireo lalana amoaham-bokatra, ireo tetezana, ireo barazy miaraka amin'ny injeniera sy mpianatra injeniera rehetra. Tohanana ireo orinasa eto an-toerana mpanamboatra goudron sy ciment;
11- Faizina mafy kosa ireo mpanimba ny fotodrafitrasa, toy ireny sisina fiarovana ny tetezana, sy ny panneau de signalisation izay lasa zaran'akandy sy tuyau hanaovana toaka gasy ireny;
12- Asiana fiofanana manokana ary tsy afaka manao izany asa izany, raha tsy mandalo io fiofanana io, ny saofera mpitatitra vahoaka, taxi-brousse, taxi-be, bus scolaire, transport personel, taxi, receveur.
13- Asiana fanofanana tsy an-doavam-bola ireo rehetra manana permis nefa mahatsapa fa tsy mahafehy ny lalànan'ny fifamoivoizana, na tsy mahay tsara mitondra fiara, na nanadino satria efa ela tsy nitondra fiara. Tsy misy fanejehana ny hoe permis mboritsiloza na tsia. Asiana capacité ny moto sy ny bisikileta rehetra mampiasa ny lalana, ampianarina any an-tsekoly ny code de la route, ka any no efa ahazoana capacité moto na bisikileta;
14- Hisy programa fanavaozana ny fiarakodia, indrindra ireo fitateram-bahoaka, sy ireo fiara hampiasa ny autoroute izay amboarina manodidiana ny Madagasikara. Tsy afaka hiditra amin'izany lalana autoroute izany ireo fiara maherin'ny 10 taona na izay tsy nahazo fahafana momba izany avy amin'ny contrôle technique;
15- Esorina eo amin'ny miaramila ny fitsarana fiarakodia, na ny contrôle technique, atao asa fandraharahana privé, fa hisy sekoly hanofana ireo mpiantsehatra amin'izany ary hanao fihanihanana eo anivon'ny Fitsarana, entitra ny fanaraha-maso ny kolikoly izay azahoana sazy goavana.
16- Hisy sekoly hanofanana ireo mécanicien, ampiana izy ireo mba hanaraka fenitra ihany koa ny asa sy ny fahadiovana, fa tsy eny amoron'ny arabe intsony no hisitrika ambany fiara.
17- Ampiana ireo sehatr'asa mpanao dépannage, ka tsy fiara tsotra intsony no hitaritarika fiara hafa, ary tsy eny ampovoan'ny arabe no hanamboatra fiara ka ampitohana ny fifamoivoizana.
18- Amboarina ihany koa ny Parking souterrain, na ny Parking aérien. Takiana amin'ireny centre commercial ireny ny hananany parking sahaza ny client ao aminy, raha tsy izany tsy mahazo fanomezan-dalana amin'izany izy.
19- Hisy ihany koa ireo Parking tsy andoavam-bola, nefa tsy ekena intsony ireny fiara efa tsy miasa mibahan-toerana ireny.
20- Eo amin'ny 40 milliards de dollar no atokana amin'izany asa fanamboaran-dalana izany, ary ampiasa olona 1 tapitrisa, ao anatin'izany ireo Service National.
21- Ny Volamena, ny vatosoa, ny bois de rose, ny hetra azo avy amin'ny ranomasina, ny hetra avy amin'ny solika sy ny fitrandahana pétrole, ny privé Malagasy sy vahiny no hamatsy vola an'izany. Ireo tompon'ny tany andalovan'ilay lalana dia hanana anjara ho actionnaire, hisokatra amin'ny Malagasy rehetra ny action. Andoavam-bola ny fampiasana ny autoroute sasany, misy kosa ireo tsy andoavam-bola. Ny route nationale rehetra tsy misy andoavam-bola.
22- Ahena ny vidi-tsolika, hitadiavana mpamatsy solika hafa, asiana raffinerie eto an-toerana, ary atosika ny fikarohana sy ny fanamboarana ny fiara mandeha amin'ny herin'aratra sy ny solaire.